mubvunzo FSX Newe
2 makore 2 ago #66 by Gh0stRider203
Chii nani nzira yokuziva mumwe nomumwe pane kukurukura zvatinoita FSX, zvakarurama?
ONLY 2 mitemo. hapana nharo (kana pane dambudziko kuitora kumwewo, NDAPOTA); uye hapana vachiseka vamwe LINKS kuti ndege musi Rikoooo peji havasi kungokurudzira, I Vagamuchirei! Ndinofarira vachiongorora kubva ndege siyana! Ko kubvira ndichiri mbudzana.
Kana pachangu ....... Ndiri CEO pamusoro American Airways VA. Ndinopedza nguva yangu pamusoro FSX achiita-refu dhonza nhumbi sezvo ndicho chinoita kuti Airline mari yakawanda. The pamusoro 2 shiri I dzinobhururuka ndivo 747-800F uye 747LCF. Tine guru rengarava kunyange pamusoro hukuru siyana.
Duku Ndinofunga ndiye Dash 8-100 uye Embraer Legacy 600.
Largest Ndinofunga aizova 747s, uye 707-320, uye 777-200LR.
Oldest aizova Boeing 314 uye 707-320
Uchitsanya aizova Concorde, pasina mubvunzo. (Kupfupikisa "Charlie", ndiri "kwete kuenda kufara kana [Ndiri] kuenda Mach-2 pamwe [My] bvudzi moto" lol)
Slowest asina mubvunzo V-22, uye CH-47, izvo isu chete kushandisa kubhururuka vashandi Oil Rig kunze rig (Kuchifinha chaizvo, asi nokukurumidza kana kushandisa negora heh)
pachako kufarira My? Ndicho chinhu yakaoma mumwe. Ndaifanira kutaura 707-320 uye C-130.
kazhinji sei I kubhururuka? Eya, kuva akatendeseka .... anenge asiri chemabhazi. Saka kure mwedzi ichi, ndava Logged 461.39 til, uye 206,931
Kana kwete kubhururuka nokuti Airline, ndichange kazhinji kuti achibhururutsa Tomcat.
Vamwe kubatana kune vamwe Rikoooo shiri I kushandisa
B747-XXX Mega pasuru (I kushandisa LCF kubva ichi - kunyange ndine zvose 747 megapacks yakaiswa lol)
Kana iwe chete kuda LCF ...
B737-700 American Airlines (NOT pari mu rengarava redu asi ndinovaziva nacho uye MUDE IT)
B777-200 (apo handina kushandisa chimwe chezvinhu vari rongedza ichi .... I REGAI zvikuru dzinokurudzira nayo!)
B707-42 (I kushandisa Captain Sim shanduro, asi achange kuedza ichi mumwe kubva vhiki rino! Gara zvirire FOR A REVIEW!)
2 makore 2 ago - 2 makore 2 ago #69 by Dariussssss
I kubvunza zvinhu zvishoma. First vanenge kukanganisa kuti rinoratidza pashure ndakaedza yokugadza Sim Hofori Gran Canaria girl. Kukanganisa ndiyo Scenery nzvimbo (nedzimwe nhamba) haana kuwanikwa. Kuti girl faira haishandi zvose zvangu FSX sp2. Sina asi kukanganisa uchiripo.
Chepiri. Zvinoita kubatanidza mashoko VC kubva A320 Family multi-livery rongedza, pamwe Thomas Ruth A330 / 340 sei uye? Vose paIndaneti kubva pano.
2 makore 2 ago #72 by rikoooo
Ndinokutendai Gh0stRider203 kwamuri kuposita, tinoziva imi zvishoma zvikuru zvino, uye kugamuchira somunhu Sachigaro pamusoro Forum.
Dariusssss: Kuti kubvisa kukanganisa iwe kungorega kubvisa girl kubva girl wako raibhurari iri FSX config. Ini achava vanotarisa girl kuongorora kana pane kukanganisa pamwe installer. zviri izvozvo chete kuitika pamwe Grand Canary kana zvimwe sceneries zvakare?
nokuti mubvunzo wako wechipiri, hungu Ndinofunga munogona batanidza kuti VC kubva A320 Family multi-livery rongedza, pamwe Thomas Ruth A330 / 340. Kuti VC dzinobatana ndapota bvunza Google kana Youtube Tutorials
2 makore mwedzi 1 apfuura #73 by Dariussssss
It kutsvaka girl munzvimbo 117 uye 123. Vose vari asipo. In scenery.cfg, yokupedzisira girl nzvimbo iri 115-Add pamusoro Scenery, hazvina ikoko panguva dzose, asi kukanganisa anoramba kuuya. Ndizvo chete nzvimbo dzokuona faira chinoita matambudziko, saka kure.
Uyewo, BN-2 Islander nokuda FSX kwazvo kuputswa.
2 makore mwedzi 1 apfuura #95 by Dariussssss
Pashure kuedza kubatanidza mashoko ataurwa VC uye Thomas Ruth A330, zvaiita akanaka zvakaipa. Ndaifanira kubvisa imwe A330s, rakanga zvakaipisisa akavhuniwa. Handidi kupa nepfambi nezvazvo kubatanidza kuti asi, handigoni kuwana chero nzira yokuita nayo.
2 makore mwedzi 1 apfuura #97 by Gh0stRider203
Dariussssss akanyora: Pashure kuedza kubatanidza mashoko ataurwa VC uye Thomas Ruth A330, zvaiita akanaka zvakaipa. Ndaifanira kubvisa imwe A330s, rakanga zvakaipisisa akavhuniwa. Handidi kupa nepfambi nezvazvo kubatanidza kuti asi, handigoni kuwana chero nzira yokuita nayo.
Vanhu c'mon..you're derailing shinda My pano
Tech probs vari pano: www.rikoooo.com/board?view=topic&catid=5&id=34
2 makore mwedzi 1 apfuura #99 by Dariussssss
OK urombo, wangu zvakaipa.
2 makore mwedzi 1 apfuura #130 by Gh0stRider203
Dariussssss akanyora: Horaiti urombo, wangu zvakaipa.
No kufunganya murume wangu, ndine zvakawanda ndege unogona kugeza uye wakisi elnaz
2 makore mwedzi 1 apfuura #177 by FCAIR
Hello zvose, ndiri pamudyandigere Akatombo vashandi vemo mukuru / I dzinobhururuka kazhinji Mats aka Military Air chokufambisa Service / C97 ndeyokuita kure yangu kufarira Plane. Neniwo kubhururuka Reeve AA Vols mhiri Alaska uye Aleutian muzvitsuwa The Lockheed L-I88 Electra Ko nokure chandinonamatira ndege huru kure kuchamhembe. Ndiri Super kukuchidzira kuti Convair ari B-36, The B-58 Hustler vakanaka bhomba nokusingaperi kubhururuka / uye Commercial 880 / 990 yakanaka kutsanya airliners. Ndinoita ngadzibhururuke pamusoro Capsim 707 & 727 rinotyisa wedzera-Ons zviripo mutengo. Ini chete vane maawa anenge 80 ari sim saka kure vachiri kudzidza uye somuKristu anosvika dzose nguva ..
Blue Nendege ..
2 makore mwedzi 1 apfuura #183 by Gh0stRider203
First kure FCAIR .... Ndinokutendai basa rako kuti nyika yedu. mhuri yangu akabatira 6 kumarudzi ikozvino, chete anenge ose pabazi asi Coast Guard. No Mashoko nokusingaperi zvechokwadi anogona kutaura kwangu kuonga kwamuri. Ndaida kushumira asi zvinosuruvarisa aihuitira Civil Air vaende (mandaifarira kusvikira pakuguma heh).
Neniwo achiwana CS 707 uye unomuda. Kutanga 'er kumusoro chinhu handina chaizvo asi vakapindira nemusoro lmao vachiri gondo kuti YouTube Video elnaz ari CS C-130 nderimwe nyaya elnaz
Time chokusika peji: 0.408 mumasekonzi